Mifandraisa aminay - Ivontoeram-javaboahary Kambodza
Institut de Gemologique de Cambodia (GEMIC Laboratory Co., Ltd.)
Street Market Street, Siem Reap, Kambodza
GEMIC dia miahiahy momba ny fiarovana sy fiarovana ny mpanjifanay. Izahay dia miantoka fa azo antoka ny fizotry ny fifanakalozana ary azo antoka ny mombamomba ny mpanjifa.
Raha mila fanontaniana bebe kokoa
Safidy sy politika fandoavam-bola
Raha manana olana amin'ny fandoavam-bola ianao na te hiresaka safidy hafa momba ny fandoavam-bola, azafady mifandraisa aminay.
Ny fonosana rehetra avy amin'ny GEMIC dia misy faktiora feno. Azafady mifandraisa aminay alohan'ny hametrahana ny kaontinao raha mila faktiora namboarina na tsy misy faktiora mihitsy.
Ambaratonga mazava mazava vatosoa
IF : Loupe madio - tsy misy kilema ao anatiny; tsy misy fampidirana.
I : Tafiditra ao - ny fahitana azy dia azo jerena amin'ny maso mitanjaka.